संखुवासभाको आर्सीभूर्इंमा ००४ सालमा जन्मिएका चक्रपाणी नेपालले ०२८ बाट पत्रकारिता सुरु गरे र अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । गोरखापत्र, मधुपर्क र नेपालीपत्रमा लेखिरहेका छन् । आफूले पत्रकारिताको सुरुवात गर्दा र अहिलेको समयको पत्रकारिताका फरक समस्या र संघर्ष उनले अनुभव गरेका छन् । रातोपाटीकर्मी आस्था केसीसँग उनले आफ्नो त्यसबेलाको पत..
बैशाख २१ बाट संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । विपक्षी काँग्रेस बजेट अधिवेशनमा सरकारमाथ..
एकीकृत माओवादीभित्र बेला–बेला विवादित बयान दिएर चर्चामा आउँछन्– गोपाल किराती । किरातीले शा..
एमालेका युवा नेता माधव ढुंगेल केही महिना अगाडि मात्रै राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा ..
एमाले सचिव योगेश भट्टराई पार्टीभित्र र बाहिर लोकप्रिय नेता मानिन्छन् । ताप्लेजुङनिवासी भट्..
भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेहरुलाई श्रद्धान्जली : कतै सम्झना, कतै आक्रोश (फोटोफिचर)
काठमाडौं – राजधानीको वसन्तपुरमा आइतबार साँझ विभिन्न संघसंस्थाको आयोजनामा भुकम्पमा परेर ज्यान गुमाउनेहरुको सम्झनामा दिप प्रज्जलन गरे । साँझ दरवार परिसरमा सयौं युवा युवतीहरु मिलेर मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै दिप प्रज्वलन कार्यक्रममा सहभागी भएका दिए । कार्यक्रममा सिने क्षेत्रमका कलाकारहरु, मोडलहरु र टेलिभिजन पर्सनालिटिजहरु..
यो लेखमा म साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षितमाथि लागेका आरोप सहि हुन् या गलत भनेर ‘मिडिया ट्रायल’ गर्न चाहन्नँ । त्यो काम पत्रकारको हो जस्तो लाग्दैन । अदालत छ, भोली उनका वारेमा तयार पारिएको अभियोग पत्र विशेष अदालतबाट सजिलै पाउन सकिने छ । त्यसमा सवै कुरा उल्लेख हुने नै छ । अख्तियारको दावी सहि या […]
दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२÷६३) को आँधीबेहरी गाउँदेखि सहरसम्म फैलियो । आन्दोलनमा सर्वसाधारणसमेत सामेल थिए । राजनीतिक दल थिए । हामी नागरिक आन्दोलन भनेर सहभागी भयौं । माओवादी, संसद््वादी शक्ति, जनता र कार्यकर्ता, दलमा सामेल नभएका नागरिक समाजका सक्रियतावादी जो आन्दोलनमा होमिए सबैका आकांक्षा विभाजित थिए या इच्छा र सपना भिन्न–भिन्न थिए । ..
नेपालको सामुदायिक आन्दोलनमध्ये सबैभन्दा जेठो आन्दोलन दलित आन्दोलन हो । कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुनुभन्दा तीन वर्षअघि देखि दलितको संगठित आन्दोलन सुरू भएको हो, जुन विभिन्न चरणबाट गुज्रियो । यो आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपले सम्बोधन गर्न सुरु गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले हो । ०४८ भन्दा अगाडि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो दस्तावेजमा दलित स..
२०६२०६३ को आादोलन साँच्चिकैको जनआन्दोलन थियो । त्यसमा पूर्ण रूपमा जनताले सहभागिता जनाएका थिए । बूढाबूढी, बच्चाबच्ची, जवान युवकयुवती, महिला, पुरुष सबै–सबैले आन्दोलनमा संलग्नता जनाए । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ०५८ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद्, संसद् भनेको लोकतन्त्रको सबैभदा महत्वपूर्ण ठाउँ, जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने संस्थालाई राजा ज्..
तत्कालीन माओवादीले १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नेता मध्येका एक हुन्, लोकेन्द्र विष्टमगर । उनी यही आन्दोलनबाट मूलधारको राजनीतिमा उदाय र मन्त्रीसमेत बने । तर, विष्ट यो स्थानमा चानचुने संघर्ष र मेहनतका बलले आइपुगेका छैनन् । बुबा–आमालाई सानै उमेरमा गुमाएका विष्टले कलिलै उमेरमा पारिवारिक जिम्मेवारी सम्हालेका ..
साताको Agenda : एकताबारे अनन्तको उद्घोष – ‘उडान भर्दै गरौं, छुट्नेहरू नयाँ टिकट लिएर आउनुहोला’
चार वर्षअघि अलग भएका दुई ठूला माओवादी पार्टी ध्रुवीकरणको तयारीमा छन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टी नेकपा क्रान्तिकारीका केही प्रभावशाली नेता प्रचण्डको नेतृत्व फेरि स्वीकार गर्दै एकीकृत नेकपा माओवादीमै सामेल हुन तयार देखिएका छन् । यही एकता प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी भएका एकीकृत नेकपा माओवादी सचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’सँग रातोपाटी..
म आफैं आश्चर्यमा परेको त्यो दिन
यसपाली नयाँ वर्ष रारामा मनाउन त्यहाँका प्रदेश समितिका इन्चार्ज र साथीहरूको निम्तो थियो । एक गते नै त्यता जाने तयारीमा थिएँ । तर एकातिर मौसम खराब भयो । अर्कातिर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्यो । त्यसैले एक गते नै चाहिँ पुग्न सकिनँ । मुगु हरेक दृष्टिकोणले पछि पारिएको जिल्लाभित्र पर्छ । आर्थ..
प्रदीप पौडेल, कांग्रेसका युवा नेता, १३ औं महाधिवेशनमा धेरै भोट ल्याएर केन्द्रीय सदस्यका लागि चुनाव जित्ने मध्येका एक हुन् । यही कारण उनी यतिबेला चर्चामा छन् । अविवाहीत यी युवा नेताको जीवनशैली, रुचि र जीवनका अन्य पाटामाथि रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । मेरो खाना मलाई सबैभन्दा मनपर्ने खाना दाल–भात नै हो । मन नपर्ने खासै […]
नेता छान्ने तरिका : हाम्रो पार्टीमात्रै होइन, अन्य सबै वामपन्थी र गैरवामपन्थी पार्टीमा नेतृत्वबारे अहिले बहस भइरहेको छ । र, यस्तो दुनियाँमै भइरहेको छ । यसमा केही सैद्धान्तिक पक्षबाट हेर्ने हो भने खासगरी एमालेले जसरी नेतृत्वको चयन गरेको छ, त्यो खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छानिराखेको अवस्था हो । सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भनेर विधान..
काठमाडौं–नेपाली राजनीतिमा २०७२ निकै उतार–चढावपूर्ण देखियो । लामो संघर्षपछि प्राप्त संविधानसभाबाट संविधान आयो तर विवादमुक्त भएन । संविधानपछि भएको मधेश आन्दोलनमा पाँच दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाए । १६ बुँदे सम्झौतपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माणलाई २०७२ सालको सबभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धी मानिन्छ । तर, त्यसपछि मधेश ..
कला समीक्षा २०७२ : खस्किँदो साहित्य, चल्दो सिनेमा र फैलिँदो रंगमञ्च
खस्किएको लेखन आख्यानकार नारायण ढकालको चौथो उपन्यास सार्वजनिक हुने हल्ला चलिसकेको थियो । आख्यान बजारमा मौलिक ‘सिग्नेचर’ भएका ढकालको कृति प्रतीक्षित थियो, त्यसैले प्रकाशक फाइन प्रिन्टले ०७२ को सुरुमै पुस्तक बजारमा पठाउने योजना बनाएको थियो । तर बैशाख १२ गते आएको भूकम्पले योजनामात्रै भत्काएन, पाठकको मनस्थिति पनि भत्काइदियो । त्यसैले..
२०७२ का अपराध : यी हुन्– सेक्स र पैसाले जन्माएका चर्चित १२ अपराध
काठमाडौँ– पहिले–पहिले खेतको आली र पानीको पालो मिचेको निहुँमा हुने अपराध अहिले पैसा र सेक्ससँग जोडिने गरेका छन् । २०७२ सालका धेरै आपराधिक घटना पैसा र सेक्ससँग जोडिएका छन् । नुवाकोटका कुमार घैंटे पैसाका लागि गुन्डागर्दी गर्थे, आफ्नी धर्म बहिनीसँग सेक्स गर्न खोज्दा प्रतिकार गरेपछि पोखराका कृतन खड्गीले नेहा पुनको हत्या गरे । सागर था..
१ मेरो खाना मलाई सबैभन्दा मनपर्ने चीज दूध–दही हो । सबैभन्दा मन नपर्ने भन्ने त्यस्तो खासै केही छैन । रेस्टुरेन्ट जाने बानी छैन । लगभग कहिल्यै जान्न भन्दा पनि हुन्छ । खानाका रूपमा फास्टफुड खानेबानी पनि छैन । बजारमा पाइने फास्टफुड मन नै पर्दैन । पहिले–पहिले युवावस्थामा खाना पकाउने पनि गर्थें । सायद सहरिया जीवनको […]
माओवादीका एक कार्यकर्ताको कथा : युद्ध, जेल, मृत्युदण्ड, उपहार अनि…
कैयौंले आफ्नो जिन्दगीलाई अरूले लेखेको स्क्रिप्टअनुसार अगाडि बढाउँछन् । आजको दुनियाँमा धेरै मानिसले लेखिएको स्क्रिप्टसँगै जीवन चलाउछन् । कसैको जिन्दगी लेखिएको स्क्रिप्टभन्दा धेरै गुणा उतारचढावपूर्ण हुन्छ । र, ती पात्रका न कथा बन्छन्, न उनका सुख दु:ख नै लेखिन्छन् । यो यस्तै एउटा पात्रको कथा हो, जसको जीवनमा धेरै घुम्ती आइलागे । उसक..
एमाले केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
प्रिय कमरेडहरू ! केन्द्रीय कमिटीको छैटौं बैठकमा उपस्थित सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न असामान्य चुनौतीलाई चिर्दै राष्ट्रलाई सही दिशावोध गर्न पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकताका कारण बैठक आयोजनामा केही बिलम्ब भएको यथार्थलाई कमरेडहरूले ..
साहित्यवारे प्रधानमन्त्रीको धारणा : हामी विद्वान पुर्खाका सन्तान हौैं
सामान्यतः कुनै पनि सिर्जना विचार र उद्देश्यबाट निर्देशित हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा ००७ सालको आन्दोलन, त्यस आन्दोलनले उब्जाएका विचार वा आन्दोलनका क्रममा खेलिएका भूमिका, त्यस आन्दोलनलाई प्रभावित गर्ने विचार, त्यस आन्दोलनलाई प्रभावित गर्ने त्यस अगाडिका साहित्य सिर्जना र तिनले पारेको प्रभावको जगमा यस संस्थाको सुरुवात भएको हामी सब..
मित्र मित्रलाल पंज्ञानी अन्तर्यामी हुनुहुन्छ । उहाँलाई र सायद उहाँहरूलाई लाग्यो– खगेन्द्र संग्रौला सम्मान लिन आउला ? यसमा मित्रलालले कल्पना गर्नुभएजस्तै मेरो पनि दुविधाहरू थिए । तैपनि म तपाईंहरूको बीचमा आएको छु । प्रगतिशील लेखक संघ मेरो पनि मातृसंस्था हो । श्यामप्रसादजीको नेतृत्वमा यसको स्थापना भयो । श्यामजीले ‘लेखक कसरी बन्ने ?..
खेतबारीमा जति धेरै खनतजोत गरेर माटो धुल्यायो, त्यति राम्रो खेती हुन्छ भन्ने प्रचलन नेपालमा छ । कृषि प्राविधिक, अनुसन्धानकर्ताले सोहीअनुसार प्रशिक्षण दिन्छन् । त्यसैले किसानले सकेसम्म जमिन धुल्याएर माटो फुरफुर बनाउँछन् । तर, जमिन सकेसम्म खनजोत गरेर होइन कमसेकम खनजोत नगरी खेती गर्यो भने बढीभन्दा बढी उत्पादन हुने नयाँ अनुसन्धानले द..
स्थापनाको समयमा कांग्रेस नेपाली समाजका मुख्य मुद्दामा धारिलो थियो । खासगरी बीपी कोइरालाको समयमा विचार दृष्टिकोण र योजनामा हामी जति प्रस्ट थियौँ, अहिले त्यस्तो छैनौँ । कांग्रेसले नेपाली समाजका मुद्दालाई जसरी प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो अवधारणा बनाउनुपर्ने थियो, त्यसरी अघि बढ्न सकिरहेको छैन । हाम्रै पार्टीमा काम गरेका कैयौँ युवा साथी..